उत्पादन बढाउन सबै नागरिकलाई सिपयुक्त ज्ञान र प्रविधिमा पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड – Business Plus Television
काठमाडौं, ३ साउन । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सबै नागरिकमा प्रविधिको पहुँच पु¥याउन सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधबार प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उत्पादन बढाउन सबै नागरिकलाई सिपयुक्त ज्ञान र प्रविधिमा पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याएर मात्र मुलुकलाई विकाशशील राष्ट्रको सूचिमा पु¥याउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि स्वस्थ र शिक्षित नागरिकको परिकल्पना गरेको भन्दै उहाँले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अमेरिकास्थित युनिर्भसिटी अफ मिनासोटाका सह–प्राध्यापक डा. सतिश देवकोटाले नेपालको समृद्धिका लागि तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सह–प्राध्यापक देवकोटाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पु¥याउन तत्कालका लागि करिव २२ प्रतिशत पूँजी अभाव हुने प्रक्षेपण गर्नुभयो ।